MakeOwn.App - iOS र एन्ड्रोइडका लागि मोबाइल एप निर्माणकर्ता
युक्रेनलाई समर्थन गर्नुहोस्
अनुवाद गर्नुहोस् र एक नि: शुल्क एप प्राप्त गर्नुहोस्!
वेबसाइट बिल्डर मोबाइल अनुप्रयोग बिल्डर
निशुल्क परिक्षण लग - इन
को लागी तपाइँको आफ्नै मोबाइल एप्स बनाउनुहोस्
आईओएस र एन्ड्रोइड कुनै परेशानी बिना!
MakeOwn.App एक प्रीमियम DIY मोबाइल अनुप्रयोग बिल्डर हो। BuildFire द्वारा समर्थित र AWS सर्भर मा होस्ट।
हाम्रो अनुप्रयोग निर्माण प्लेटफर्म व्यवसाय र उद्यमीहरु लाई दुनिया भर मा निर्माण गर्न को लागी मद्दत गर्दछ
र सफल अनुप्रयोगहरु प्रकाशित, कोड को एक लाइन लेख्न बिना।
30-दिन परीक्षण सुरु गर्नुहोस्
कुनै क्रेडिट कार्ड आवश्यक छैन
मोबाइल अनुप्रयोग बिल्डर
MakeOwn.App सबैभन्दा छिटो र सजिलो तरीकाले मोबाइल मोबाइल अनुप्रयोगहरु बनाउन को लागी हो।
ड्र्याग र ड्रप अनुप्रयोग बिल्डर
केवल तान्नुहोस् र छोड्नुहोस् स्क्र्याच बाट एक अनुप्रयोग निर्माण को माध्यम बाट तपाइँको तरीका, वा टेम्प्लेट को एक अनुकूलित गर्नुहोस्।
शक्तिशाली र लचीला प्लेटफर्म
हाम्रो एप निर्माण प्लेटफर्म शक्तिशाली र लचीलो छ तपाइँको साथ मापन गर्न को लागी तपाइँको ब्यापार बढ्छ।
इन-एप खरीद र Shopify
तपाइँको अनुप्रयोग को लागी ई-वाणिज्य सुविधाहरु लाई सक्षम गर्नुहोस् र तपाइँको सामग्री मुद्रीकरण शुरू गर्नुहोस् वा मात्र उत्पादनहरु बेच्नुहोस्।
सजीलै बजारमा प्रकाशित
एक क्लिक सबै यो एप्पल को एप स्टोर र गूगल को प्ले स्टोर मा तपाइँको एप्स प्रकाशित गर्न को लागी लिन्छ।
पूर्ण अनुकूलन योग्य अनुप्रयोगहरु
हाम्रो DIY मोबाइल अनुप्रयोग बिल्डर तपाइँ सजिलै संग कुनै पनी कोड लेख्न को लागी तपाइँको अनुप्रयोग को हरेक पहलू अनुकूलित गर्न दिन्छ।
गतिशील पुश सूचनाहरु
स्मार्ट पुश अधिसूचना सन्देश पठाएर, तपाइँको दर्शकहरु को सगाई र अवधारण बढाउनुहोस्।
हाम्रो प्लेटफर्म को बारे मा अधिक जान्नुहोस्
सजीलै प्लगइन संग तपाइँको अनुप्रयोग को लागी शक्तिशाली कार्यक्षमता जोड्नुहोस्।
हाम्रो सुविधा मार्केटप्लेस कार्यक्षमता को कुनै पनी अनुप्रयोग को आवश्यकता को बहुमत कभर को एक विस्तृत श्रृंखला शामिल छ।
अत्यधिक अनुकूलन वा अद्वितीय सुविधाहरु को लागी, तपाइँ तपाइँको आफ्नै प्लगइन विकास गर्न सक्नुहुन्छ, वा हामीलाई तपाइँको लागी यो विकास गर्न दिनुहोस्।
एउटा अनुप्रयोग बनाउन को लागी सबै मा एक समाधान
जोखिम मुक्त र सन्तुष्टि ग्यारेन्टी
सबै उपकरणहरु को लागी एक साथ बनाउनुहोस्
तपाइँको वेबसाइटहरु र ब्लगहरु लाई एप्स मा रूपान्तरण गर्नुहोस्
कुनै पनि भाषा मा तपाइँको अनुप्रयोग अनुवाद गर्नुहोस्
गुगल र फेसबुक विज्ञापन संग जोड्नुहोस्
नि: शुल्क पूर्व निर्मित टेम्पलेट्स र स्टक फोटोहरु
हाम्रो अनुप्रयोग टेक्नोलोजी पार्टनर BuildFire हो
हामी अमेजनको सर्भर मा एप्स होस्ट
Zapier र खण्ड संग तपाइँको एप अपग्रेड गर्नुहोस्
मोबाइल अनुप्रयोग उदाहरण
हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग बिल्डर द्वारा बनाईएको अनुप्रयोगहरु को केहि जाँच गर्नुहोस्।
हाम्रो एप्स डाउनलोड गर्नुहोस्
मूल्य निर्धारण र योजनाहरू
हामी सबै आकार को व्यवसाय र परियोजनाहरु को लागी योजनाहरु प्रदान गर्दछौं।
तपाइँ 30 दिन को लागी नि: शुल्क हाम्रो सेवा को कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै क्रेडिट कार्ड को आवश्यकता छैन र यदि तपाइँ हाम्रो योजनाहरु मध्ये एक को सदस्यता लिने निर्णय गर्नुहुन्छ,
तपाइँ पनि एक 30 दिन पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी हुनेछ।
वार्षिक 50% बन्द
अमेरिकी डलर GPB युरो
सबै चीज तपाइँ तपाइँको आफ्नै अनुप्रयोग को निर्माण शुरू गर्न को लागी आवश्यक छ।
22 XNUMX०/ mo
बचत गर्नुहोस्: $ १०324
बचत गर्नुहोस्: ₤240
बचत गर्नुहोस्: €288
एन्ड्रोइड र आईओएस एप्स
मोबाइल र ट्याब्लेट उपकरणहरु
नि: शुल्क एप सबमिशन
अधिक शक्ति र सुविधाहरु संग तपाइँको अनुप्रयोग उचाल्नुहोस्।
46 XNUMX०/ mo
बचत गर्नुहोस्: $ १०684
बचत गर्नुहोस्: ₤504
बचत गर्नुहोस्: €600
अधिकतम संभावनाहरु संग तपाइँको ब्यापार अनुप्रयोग माथि उठाउनुहोस्।
143 XNUMX०/ mo
बचत गर्नुहोस्: $ १०2124
बचत गर्नुहोस्: ₤1560
बचत गर्नुहोस्: €1878
40 XNUMX०/ mo
84 XNUMX०/ mo
260 XNUMX०/ mo
कर समावेश छैन।
के तपाइँ एक पशु आश्रय हुनुहुन्छ,
वा एक जनावर उद्धार समूह?
हामीलाई तपाइँको मिशन को समर्थन गरौं! यो हाम्रो ठूलो सम्मान हुनेछ
जनावर प्रेमीहरु लाई बिल्कुल मुक्त को लागी अनुप्रयोगहरु लाई बनाउन को लागी।
हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस थप जान्न।
के तपाइँ एक एजेन्सी वा एक पुनर्विक्रेता हो,
वा मात्र धेरै अनुप्रयोगहरु छन्?
हाम्रो पुनर्विक्रेता साझेदारी कार्यक्रम को सदस्यता लिनुहोस् र हाम्रा सबै प्रदान गरिएका सेवाहरु को लागी आजीवन छुट कमाउनुहोस्।
अनुरोध पुनर्विक्रेताहरू थप जान्न।
के तपाइँसँग एउटा प्रश्न छ? मा जवाफ खोज्नुहोस् ज्ञान आधार वा भ्रमण गर्नुहोस् सहायता केन्द्र.
नवीनतम मोबाइल अनुप्रयोग वृद्धि रणनीतिहरु, प्रवृत्तिहरु र अपडेट प्राप्त गर्नुहोस्।
उत्पादन पृष्ठ अनुकूलन के हो?
एप्पलको उत्पादन पृष्ठ अप्टिमाइजेसन (पीपीओ) एप विकासकर्ताहरू र मार्केटरहरूका लागि हालैका रोमाञ्चक सुविधाहरू मध्ये एक हो। एप स्टोरमा लाखौं एपहरू उपलब्ध छन्, यो ध्यान दिन अझ गाह्रो हुँदै गइरहेको छ। यसैले उत्पादन पृष्ठ अप्टिमाइजेसन प्रयोग गर्नाले निश्चित रूपमा तपाइँलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धा मा एक किनारा दिनेछ। उत्पादन पृष्ठ अनुकूलन के हो? […]
लुकेको मोबाइल खेल प्रवृत्ति र तिनीहरूलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने
मोबाइल गेमहरूको प्रकृति प्रत्येक वर्ष विकसित हुन जारी छ, र फेसबुकको हालैको मेटामा रिब्रान्डिङले यी खेलहरूको भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। फेसबुकले मोबाइल गेमहरूलाई पहिलो स्थानमा लोकप्रियता हासिल गर्न मद्दत गर्नमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ, र थ्रीडी र भर्चुअलमा नयाँ जोड दिने कुराहरूका लागि दर्शनहरू […]
11 तरिकाहरू इन-एप राजस्वको लागि पुरस्कृत भिडियोहरू प्रयोगकर्ताहरूलाई थप आकर्षक बनाउन
यदि तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूलाई निरन्तर रूपमा तपाइँको एपसँग संलग्न राख्न र अधिकतम प्रतिधारण गर्ने तरिकाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, पुरस्कृत भिडियो विज्ञापनहरू त्यसो गर्ने उत्कृष्ट तरिका हो। पुरस्कृत भिडियोहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई निश्चित समयको लागि छोटो भिडियो विज्ञापन हेरेर निश्चित इन-एप पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सक्षम बनाउँछन्। पुरस्कार र प्रकारका आधारमा […]
नि: शुल्क एक विशेषज्ञ भाडामा लिनुहोस्
ई वाणिज्य अनुप्रयोग
हाम्रा केही विश्वव्यापी ब्रान्डहरू हेर्नुहोस्:
उपयोग नियम · गोपनीयता नीति · सन्तुष्टि ग्यारिटी
© 2022 3DMA लिमिटेड। सबै अधिकार सुरक्षित।
हामी हाम्रो वेबसाइट मा कुकीहरु को उपयोग तपाइँ तपाइँको प्राथमिकताहरु लाई याद गरेर र दोहोरिएका भ्रमणहरु लाई सबैभन्दा सान्दर्भिक अनुभव दिन को लागी। "सबै स्वीकार गर्नुहोस्" मा क्लिक गरेर, तपाइँ सबै कुकीहरु को उपयोग को लागी सहमत हुनुहुन्छ।